We Fight We Win. -- " More than Media ":ဲပြည်သူတဦး က ဒေါ်စုသို့ ရင်ဖွင့် ပန်ကြားချက်
ဲပြည်သူတဦး က ဒေါ်စုသို့ ရင်ဖွင့် ပန်ကြားချက်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်...ရှင့်။ အန်တီစု မိတ်ဆွေ ၀န်ကြီး ဦးအောင်ကြည်ကုို ပြောပေးပါ။ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် အက်ဆစ်ကန်နဲ့ ယမ်းစိမ်းပေါက်ကွဲမှုအတွက် တာဝန်ရှိသူတွေကုို အမြန်ဖော်ထုတ် အရေးယူပေးဘုို့။ ဦးအောင်ကြည်က မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ကြံ့ဖွံ့ အမတ်ပါ။ ပေါက်ကွဲစေတဲ့ ဓါတုဗေဒပစ္စည်းတွေကုို ဘယ်လုိုထားသုိုရမယ်ဆုိုတာ လမ်းညွှန်မှုမပေးနုိုင်တဲ့ စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီး ၀င်းမြင့်ကုိုလဲ အရေးယူဘို့ ပြောပေးပါ။ အန်တီစု ကုိုယ်တုိုင် မီးဘေးသင့်နေရာ ဒုက္ခသည်တွေကုို သွားကြည့် အားပေးသင့်ပါတယ်။
Why you are asking DASSK to tell U Aung Kyi. You can makeaquestion directly. How suchashame, this kind of creature always want to depend on DASSK, she is just tiny lady and havingahuge load of duties.
29 December 2011 at 03:39
ခင်ရတနာ ဆုိုတာ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ နာမည်ကြီး နုိုင်ငံရေးသမားတွေကုို လုိုက်ဖဲ့ပြီး ကုိုယ့်ကုိုယ်ကုို နာမည်ကြီးအောင် လုပ်နေတဲ့လူ.
ဟုိုတနေ့ကဆုို ဇာဂနာကုို ဖဲ့ထားတာမှ...ဘာမသိ ညာမသိ စွတ်ရွတ်ပြီး..
အခု ဒေါ်စုမကြည့်ခင် သူသွားကြည့်..သူသွားပြီး လူကြီးတွေကုို တောင်းဆုိုသင့်တယ်။
29 December 2011 at 09:18
ရုပ်ကိုက ကျပ်မပြည့် တဲ့ပုံနဲ့ စိတ်ပိန်တယ်
10 January 2012 at 09:32